Raspberry sii kordhaya | February 2020
Sida loo daryeelo raspberries, xeerarka faafinta dhirta
Mid ka mid ah dalagyada ugu jecel beerta waa raspberry. Dhul naadir ah oo aan lahayn mashiinka raspberry mid ama noocyo badan. In this article waxaan kuu sharxi doonaa sida koraan iyo daryeelka ee raspberries remontant. Sida loo dhajiyo raspberries, iyo haddii ay u baahan tahay in la sameeyo Mid ka mid ah siraha ugu weyn ee raspberries sii kordhaya ee noocyada this waa nidaamka waraabka saxda ah.
Asturberry Hercules: sharaxaadda kala duwan, beerashada iyo beerashada
Raspberry Hercules - shaqo ee farshaxanka dhirta. Riyaha beerta riyadu waa run - miro yar oo casaan ah, casiir badan sanadka la beerto, goosashada cajiib ah, xitaa dhaxan, iyo wax kasta oo aan lahayn khibrado gaar ah iyo welwel. Ma taqaanaa? Naxariistii remontant (laga bilaabo Fr. Remontant - inuu kiciyo, dib-u-ubaxyo) raspberries - inay midho u dhasho laba jeer sannadkii.
Raspberry huruud ah - mid ka mid ah dalagyada aan caadiga ahayn, oo aan inta badan laga helin beerta guriga. Oo gabi ahaanba waa wax aan micne lahayn, tan iyo markii uu kordhay berrinkaan, mar horeba suurtagal maaha in la diido. Raspberry Yellow wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah oo ku saabsan noocyada guduudan iyo madow. Iyada oo ay ku jirto nuxurka yar ee daawada anthocyanins (dyes), macnaheedu ma aha xasaasiyad carruurta yaryar oo ku habboon haweenka uurka leh.
Talooyinka ugu sareeya ee raspberries sii kordhaya Hussar: sharaxaadda kala duwan, beerto iyo daryeelka
Hussar waa noocyo tayo leh oo tayo leh oo aan qabyo ahayn oo ku guuleystay beertayaal badan. Xataa iyada oo duurka u diyaarsan daryeel yar keenaan dhalidda sare. Dhirta raspberry Hussar waa kuwo waaweyn, dhalaalaya, dhanaan-macaan iyo dabacsanaan leh. Aynu sii wadi karno sharaxaadda beeraha Gusar raspberry, iyo sidoo kale barashada dabeecadaha beeritaanka iyo daryeelidda dalagga.
Noocyada beerista ee raspberry "Caramel": noocyada dabeecadda, beerto iyo daryeelka
Munaasabada kala duwan ayaa mar walba soo jiidata dareenka. Miro, ballaaran oo ballaaran, ay duurka, qaadashada miro inta lagu jiro xilliga oo dhan ma aha dhammaan faa'iidooyinka noocyo cusub. Mid ka mid ah badeecadan cusub waa raspberry "Caramel". Waxay u muuqatay waqti dheer ka hor, sanadka 2013, iyo milkiilayaasha noocyo kala duwan ayaa ku qanacsan goosashada ugu horeysay.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato si ay u koraan raspberries Yellow Giant
Dad badan ayaa caadeystey in ay arkaan kaliya raspberries casaan ama casaan, iyo qayb yar oo beeralaydu ka warqabaan jiritaanka muraayad madow iyo jaalaha ah. Tani waa arrin aad u yar in ay kula kulanto beeraheena. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa noocyada raspberry kala duwan ee Yellow Giant. Qadar yar oo ah anthocyanin genes, waxay ku haboon tahay isticmaalka carruurta yaryar, xasaasiyad iyo haweenka uurka leh.
Qeexida noocyada ugu waaweyn ee raspberry madow
Raspberry ayaa muddo dheer lagu ixtiraamay dadka degaanka. On santuuqyada beerta aad horey u la kulmi kartaa raspberry madow oo gaar ah. Warshad Tani waxay keenaysaa wax-soosaarkooda oo badan, waxay ka caawisaa qabow, iyo noocyo kala duwan oo raspberry madow kala duwan dhadhanka xiisaha iyo midabka berry. Raspberry Black waxaa sidoo kale loo yaqaannaa blackberry sida. Waxay ka tirsan tahay qoyska Rosaceae oo naga yimid oo ka yimid Waqooyiga Ameerika.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato beeritaanka iyo daryeelidda geedka raspberry Tarusa
Rasmi ah oo caleemo ah ma jiro cid aan indho la'aan aheyn. Gaar ahaan marka ay u eg tahay geed. Beedka kasta waxaad arki kartaa noocyo kala duwan oo berry ah. Beelaha ugu caansan waxaa hadda loo tixgeliyaa geed geedka Tarusa. In maqaalkan waxaad ku baran doontaa sida si habboon u beeri iyo daryeelka ee kala duwan ee kala duwan ee raspberries.
Raspberry "Cumberland": dabeecadaha kala duwan iyo beerista agrotechnology
Diidmada asalka ah ee noocyada raspberry rasmiga ah ee rasmiga ah, qaabkeeda madow waxay u egtahay mid aan caadi aheyn, maaddaama ay xanuun badani ku dhacday dhulalka gudaha. Maxaan dhihi karaa, xitaa iibka ma aha marwalba suurtagal ah in la helo geedo of raspberry madow "Cumberland", taas oo ah sababta ay dad yar u daryeeli beerto iyo daryeelka.
Sida loo koro raspberry miro waaweyn "Atlant"
Dayactir noocyo raspberry waa mid aad u caan ah beerta maanta. Raspberry "Atlant" waxay u qalantaa aqoonsi gaar ah sababtoo ah caabbinta sare ee cudurada, iyo qodobkan waxaad ka heli doontaa sharaxaad ka duwan noocyada kala duwan, sawirada iyo xeerarka daryeelka. Noocyada bayoolojiga ee noocyada kala duwan Si loo helo aragti dhow oo noocyo kala duwan oo raspberry ah, bilowga hore waxaan tixgelin doonaa qaababka bayoolojiga iyo muuqaalka.
Sida loo aaso raspberries dayrta
Kalluunka rasmiga ah waa mid aad u soo jiidasho leh ninkii beerta ka shaqaynayay, maaha oo kaliya maadaama ay awoodaan inay midho u dhali karaan, laakiin sidoo kale waxay ku xiran yihiin shaqadooda qurxinta. Ku beeray asalka derbiga ama kooxaha cawska ah ee raspberries leh miraha midab leh waxay abuuri doonaan qurux badan oo muuqaal ah muuqaal caleenta caleenta ah.
Raspberry Polka: sharaxaad iyo beerista ee berry waaweyn-fruited
Way adagtahay in la helo deganaha xagaaga, oo ah meesha ay ka sameysan tahay raspberries dhadhan fiican leh oo aan bararsaneynin. Si wadajir ah ula socda currants, strawberries iyo dhirta kale ee faa'iido leh, waxay ku faantaa meel ku dhow beerta ku dhow. Maanta, waxaa jira in ka badan 120 noocyo kala duwan oo dhirta ah, laakiin dadka intooda badani waxay xiiseynayaan oo keliya geedo waaweyn oo leh miro waaweyn oo dhalaalaya.
Sidee loo jaraa raspberries
Kuwa aaminsan in qoynta raspberry cufan ee berry ah u bislaadaan in ka badan on duurka u daaqsata, waxay aad u qaldan. Haddii aan isbarbardhigo baadiyaha u weyn iyo gooyaa, waxay isla markiiba ogaan doontaa in miraha ay u bislaadaan si ka baxsan caleenta badan, iyo tayada dhadhanka ayaa si fiican uga wanaagsan kuwa berry ah ee koray on digaagga la jarjaray.
Waxaan koraan noocyo raspberry "Kirzhach"
Nooc khudradda Kirzhach ayaa muddo dheer ku koray dhirta dacha ee dad badan. Ma aha mid ku kala duwan sifooyinka rabbaaniga ah, laakiin siideynta caadiga ah, gaar ahaan daryeel taxadar leh looma baahna. Sidaa darteed, kala duwanaanta raspberry waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dalka.
Maanta waxaa jira tiro badan oo kala duwan oo raspberry ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan waa kuwo caan ah. Dhawaan, noocyo raspberry Canadian, taas oo ah wakiil cad oo ka mid ah noocyada ugu fiican ee kooxdan, waxaa inta badan laga helaa siraha dacha. Maqaalkeenna, waxaan ku siin doonaa sharaxaad ku saabsan noocyadan iyo sharaxaad ka bixi sida loo daryeelo.
Abuurtaan raspberries kibir ee Russia ee beerta uu
Dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan cunno nooca delicious, fitamiin oo hodan ku ah xagaaga. Mid ka mid ah noocyada raspberry caadiga ah iyo jecel ee dadka degaanka xagaaga waa kibirka Ruushka. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa kala duwan ee noocaas ah iyo sida loo daryeelo duurka. Tilmaamaha Raspberry Qosolka Ruushka waxaa inta badan laga helaa sawirada dacha, iyo sharaxaad ka duwan ee kala duwan ay yaqaanaan dhammaan beerta hiwaayadda.
Sida loo aaso raspberries guga
Raspberries - dhadhan fiican, oo udgoon oo miro leh oo caafimaad leh. Ku saabsan sheekooyinka iyo heesaha. Isla mar ahaantaana, geedka waa gabi ahaanba aan qabyo ahayn, iyo xitaa a starice koraan karo geedo fruiting. Beerta laga beerto xilliga guga waxaa loo tixgeliyaa sida ugu wax ku oolka badan iyo wax soo saar leh - aynu eegno sababta. Erayada xilliyada gu'ga ah Waxaan ogaannaa marka la beeri karo raspberries guga.
Astaamaha aasaasiga ah ee daryeelka ee raspberries ee guga
Delicious iyo udgoon, macaan iyo caafimaad leh, bogsashada iyo berrito jecel - raspberry. Way adag tahay in la qiyaaso in aysan jirin miro yar oo dacha ah, sababtoo ah uma baahna fiiro dheeraad ah, iyada oo daryeel ku habboon loo sameeyey raspberries xilliga gu'ga, waxay ku farxi doontaa goosashada baaxada leh. Beerto iyo gawaadhida daaqsinta. Geedka kasta wuxuu jecel yahay "qaabkiisa" oo ka kooban ciidda, badan oo iftiin iyo deris ah.
Xeerarka daryeelka guga iyo quudinta raspberries ee guga
Ku quudiyo raspberries guga ama aan ahayn - taasi waa su'aasha. Aan aragno waxa si toos ah daryeelka guga loogu talagalay raspberries waa, iyo waxa dhab ah waa lagama maarmaan tahay in bacrimiya raspberries ee guga si loo kordhiyo dhalidda. Waa maxay daryeelka gu'ga? Jadwalku wuxuu soo baxaa guga hore, taas oo micnaheedu yahay wakhtigii uu bilaabi lahaa shaqo raspberries.
Noocyada raspberry strawberry sii kordhaya
Miyaad rabtaa baadiyaha raspberry aan caadi ahayn oo leh miraha macaan iyo caleemo qurxoon oo isku midka ah BlackBerry? Isku darka berriga waxaa lagu magacaabaa raspberry Tibetan. Maanta, dadka deggan Baltic iyo Poland ayaa si fiican uga warqabta, halka Ukraine ee noocyada weli walaac aan la garanayn. Aynu si dhakhso ah ula socono!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Raspberry sii kordhaya 2020